News Summary from Nepal for Thursday, October 14, 2021
Visitor from US is reading News Summary from Nepal for Thursday, October 14, 2021
Visitor from DE is reading roomate needed
Visitor from UA is reading Don’t rush to Nepal to help. Read this first
Visitor is reading MOVIE OF THE YEAR- TRAILER
Visitor from UA is reading Natural disasters are more powerful than the gods
Visitor from RU is reading i need help
[VIEWED 137 TIMES]
Posted on 10-14-21 10:10 AM Reply [Subscribe]
Coach announces he is stepping down after Nepal’s made it to SAFF final followinga1-1 draw against Bangladesh.
दसैँमा काठमाडौं सुनसान
'के दसैं बनाएको यस्तो?'
सुनसान काठमाडौं! (तस्बिरहरू)
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजया दशमीको नवौं दिन नवकन्याहरुको पूजा गरेकी छन् । बिहीबार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारीले महानवमीको शुभदिनमा नवकन्याहरुको पूजा गरेकी हुन् ।
नर्वेमा एक व्यक्तिले तीर आक्रमण गरी ५ जनाको हत्या गरेका छन् । बुधबार साँझ कोंग्सबर्गमा ती व्यक्तिले अन्धाधुन्ध तीर आक्रमण गरेको बताइएको छ ।
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । नेपालमा बिहीबार थप ४ सय ५५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । देशभर गरिएको ३ हजार ४ सय १८ पीसीआर परीक्षणका क्रममा ३ सय ९८ जना र २ हजार ७ सय ९६ एन्टीजेन परीक्षणका क्रममा ५७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङमा दसैँको महानवमीको दिन बिहीबार जिप दुर्घटना हुँदा १८ जना घाइते भएका छन् । मेची राजमार्गअन्तर्गत फुङ्लिङ नगरपालिका–८ दोखुको ल्याङ्बा सडक खण्डमा मे १ ज २०५६ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटना हुँदा गर्भवती महिलासहित नौ जना गम्भीर छन् भने बाँकी सामान्य घाइते भएका छन् । सरदमुकाम फुङ्लिङदेखि सिरिजङ्घा गाउँपालिका
मेरा लागि दसैँ फुर्सदको समय हो : नेता गगन थापा
सप्तमीको दिनसम्म पार्टीको कार्यक्रम छ । त्यसरी नै वित्छ । अष्टमीबाट परिवारसँग पहिलेजस्तै सामान्य रूपमा मनाउने योजना छ । हामीहरूको खास एउटा गुठी छ । थापाहरूको गुठीमा सामूहिक टीका हुन्थ्यो । तर गत वर्षदेखि कोभिड-१९ संक्रमण महामारीले रोकिएको गुठी टीका यसपालि पनि रोकिने भएको छ । त्यसो हुँदा आफ्नै परिवार
बलेवा । नवरात्र सुरु भएदेखि नै दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको बलेवा कालभैरवको मन्दिरमा यस वर्षको नवमीमा विगतका वर्षमा भन्दा धेरै भक्तजनको घुइँचो लागेको छ । यहाँ अवस्थित कालभैरवको दर्शन गर्न गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला तथा छिमेकी प्रदेशबाट समेत दर्शनार्थी आएका छन् । आफूले गरेका भाकल पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले बलेवाका कालभैरवको